အိန္ဒု-ကော့ကရိတ် လမ်းပိုင်းကို ရက်သတ္တ နှစ်ပတ်ခန့် ပြုပြင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် အချိန်ပိုင်း လမ?? - Yangon Media Group
အိန္ဒု-ကော့ကရိတ် လမ်းပိုင်းကို ရက်သတ္တ နှစ်ပတ်ခန့် ပြုပြင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် အချိန်ပိုင်း လမ??
ကော့ကရိတ်၊ သြဂုတ် ၂ဝ
မိုးရွာသွန်းမှုများပြားသောကြောင့် ကရင်ပြည်နယ် မြဝတီ- ဘားအံလမ်းပေါ်ရှိ အိန္ဒု-ကော့ကရိတ်လမ်းပိုင်းမှာ ဆိုးရွားစွာပျက်စီးနေသောကြောင့် သြဂုတ် ၂ဝ ရက် နံနက်ပိုင်းမှ စတင်၍ ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်ခန့် အချိန်ပိုင်း လမ်းပိတ်၍ ပြုပြင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။”ဒီလမ်းပိုင်းက မိုးများတော့ နေရာသုံးနေရာလောက် ဆိုးဆိုးရွားရွားပျက်သွားတယ်။ ဒါကို ပြည်နယ်အစိုးရရုံးမှာ ကျွန်တော်တို့ တာဝန်ရှိသူတွေ သြဂုတ် ၁၈ ရက်မှာ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီး အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ အခု ၂ဝ ရက် နေ့ကစပြီး နေ့စဉ်နံနက် ၇ နာရီက နေ မွန်းလွဲ ၂ နာရီအထိ အချိန်ပိုင်း လမ်းပိတ်ထားပြီး ရက်သတ္တပတ် နှစ်ပတ်ကြာအထိ ဆောင်ရွက်သွားမယ်”ဟု ကရင်ပြည်နယ် ဗမာတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဦးတေဇထွဋ်လှိုင်ထွေးက ပြောကြားသည်။
ယခုရက်ပိုင်းများ၌ မိုးများစွာရွာသွန်းခဲ့မှုကြောင့် အဆိုပါအိန္ဒု- ကော့ကရိတ်လမ်းမှာဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးခဲ့ပြီး မြဝတီ-ကော့ကရိတ်- ဘားအံနှင့်ရန်ကုန်သို့ပြေးဆွဲနေ သော မော်တော်ယာဉ်များနှင့်ကုန် တင်ယာဉ်များမှာ ဗွက်နစ်ကာ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများ ကြာ မြင့်စွာ ဖြစ်ပေါ်နေရသည်။ ”CRBCကုမ္ပဏီအနေနဲ့လမ်း ပြုပြင်ဖို့ ကရင်ပြည်နယ်လွန်းည ကျောက်မိုင်းက ကျောက်ထုတ်ယူတယ်။ ဒါကိုဒေသခံတွေက ကန့်ကွက်ကြတော့ ကျောက်ထုတ်ယူမှု ရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်။ နောက်ပြီး ရန်ပုံငွေထုတ်ပေးခြင်းကိုလည်း ခေတ္တရပ်ဆိုင်းခဲ့လို့ လမ်းကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲ လမ်းကဆိုးရွားစွာပျက်စီးခဲ့တာပါ။ အခု CRBC ကုမ္ပဏီကပြင် ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပြီး ပြင်ဆင်နေတဲ့ အချိန်မှာယာဉ်သွားလာမှုတွေကို ခေတ္တပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘားအံဘက်ကိုမြဝတီကသွား မယ့်ယာဉ်တွေအနေနဲ့ကျားက လေးလမ်းဘက်က ပတ်သွားလို့ ရ ပါတယ်”ဟု ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဦးသန့်ဇင်အောင် ကပြောကြားသည်။
မြဝတီ-ဘားအံလမ်းမကြီး ပေါ်ရှိ (အိန္ဒု- ကော့ကရိတ်) လမ်းပိုင်း ၆၆ ဒသမ ၄ ကီလိုမီတာ (၄၁ ဒသမ ၂၅ မိုင်) အရှည်အား ADB ချေးငွေဖြင့် CRBC (China Road and Bridge Construction) ကုမ္ပဏီမှ အကြီး စားပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါကုမ္ပဏီအနေဖြင့် လမ်းပြုပြင်ရာ တွင်အသုံးပြုရန်အတွက် ကျောက်များထုတ်လုပ်မှုကို ဒေသခံများ ကကန့်ကွက်မှုရှိခဲ့သောကြောင့် လမ်းပြုပြင်မှုလုပ်ငန်းရပ်နားခဲ့ရ ခြင်းဖြစ်သည်။